Mpanamboatra sy mpamatsy bobongolo tsindrona - Orinasa famolavolana tsindrona China
Ny ampahany lehibe amin'ny lasitra fiara dia ny lasitra fanakonana. Maty mangatsiaka indrindra io karazana maty io. Amin'ny lafiny ankapobeny, ny "lasitra fiara" dia ny teny ankapobeny amin'ny mould izay ampiasaina amin'ny fanamboarana ny faritra rehetra amin'ny fiara. Ohatra, ny bobongolo nohitsakitsahana, bobongolo tsindrona, bobongolo hosoka, bobongolo savoka, lasitra fitaratra, sns. Ireo ampahany nohomboana amin'ny vatan'ny fiara dia zarazaraina ho faritra manarona, faritra misy andry ary faritra fanombohana ankapobeny. Ireo faritra nohomboana izay afaka maneho mazava ny char ...
Ny fizarana fiara mandeha isan-taona dia manamboatra bobongolo eo ho eo 1200 eo ho eo, indrindra amin'ny bobongolo anatiny sy salantsalany, tranga mahazatra toy ny bobongolo dashboard ho an'ny ford, Volkswagen, Benz, the Great Wall ary stc. bobongolo tontolon'ny vavahady entina entona entona, manasongadina lasitra grille tsy misy marika, bobongolo tsanganana ambany miorina amin'ny jaguar Sanmen miorina amin'ny 36000 metatra toradroa miaraka amina mpiasa 350 mahery, ary mamokatra lasitra maherin'ny 600 isan-taona. Fantatra izany ...
Ny tendrony aloha sy aoriana amin'ny fiara dia miaraka amina mpitaingina basy, izay tsy vitan'ny hoe manana haingon-trano fotsiny, fa ny tena zava-dehibe dia fitaovana fiarovana izy ireo izay mandray sy manamaivana ny fiantraikany ivelany, miaro ny vatana ary miaro ny vatana sy ireo olona ao anatiny. Ny mpitaingina fiara aloha sy aoriana dia vita amin'ny akora vy. Ny vy fantsona miendrika U dia voahidy avy amin'ny takelaka vy miaraka amin'ny hateviny mihoatra ny 3 mm, ary ny tampony dia voaravaka chrome. Rivet na ampiarahina amin'ny lalamby, ...
● Rafitra ivelany
● Rafitra anatiny
● Rafitra fampangatsiahana
● Fanamafisam-peo / Refrigerator
Vahaolana sy famolavolana bobongolo ho an'ny fitaovana ara-pitsaboana lehibe, fitaovam-panatanjahan-tena toa ny MRI, CT ary treadmill sns ny tombony ananantsika Kalitao avo lenta (bobongolo sy kalitaon'ny vokatra) Fanaterana ara-potoana (Sampelan'ny fankatoavana & fanaterana bobongolo) Fanaraha-maso ny vidiny (vidiny mivantana sy tsy mivantana) tsara indrindra Rafitra serivisy (Serivisy ho an'ny mpanjifa, mpiasa ary mpamatsy )— Rafitra fitantanana U8 ERP Fanao mahazatra - Antontan-taratasy momba ny fibaikoana ny lozisialy ao amin'ny tetikasa — ISO9001-2008 fanamarinana - Fanombanana ny fahombiazan'ny mpiasa Syste Kaihua manaraka ny “vahoaka ...